जोरपाटीमा घ’ट्यो ड’र’लाग्दो घ’टना ! युवतीले प्रेम प्रस्ताब नमान्दा युवकले संसार त्यागे (हेर्नुस् भिडियो) - Nepal Insider
January 20, 2020 778
काठमाडौँको जोरपाटीमा एक युवाले आ’त्मह’त्या गरेका छन् । रौतहट घर भइ जोरपाटीको दक्षिणढोका नजिकै रहेको एक गलैचा उद्योगमा काम गर्दै आएका टेक बहादुर तामाङले गलैचा कारखानामा रहेको एक फलामको डन्डीमा झु’न्डिएको अवस्थामा फेला परेका छन् । १८ वर्षीय तामाङले केटीको कारण कारण आ’त्मह’त्या गरेको भन्ने खुलेको छ ।
केटीले तामाङसँग बिहे गर्न नमानेपछि उनले आ’त्मह’त्याको बाटो रोजेको भन्ने उनिसँगै काम गर्ने छिमेकिले बताएका छन् । बिहान ४ बजे समयमा उनी गलैचाको तान डोरीले पा’सो लगाएर झु’न्डिएको अवस्थामा फेला परेका हुन् । उनका छिमेकीका अनुसार मृ’तक तामाङ निकै मिलनसार र असल स्वभावका रहेका थिए । स्थानीय प्रतक्षदर्शीका अनुसार उनले आ’त्मह’त्या गरेको हो या उनको ह’त्या भएको हो भन्नेमा संका लागेको बताएका छन् ।
मृ’तकको आमाबुवाले खबर गरे पश्चात् प्रहरी आएर घ’टनाको बिवरण लिएर गएका छन्। अहिले उनको श’व पो’ष्टमा’र्टमका लागि टिचिङ अस्पताल लागिएको जनाइएको छ। घ’टनाको बारेमा सत्य तथ्य पत्ता लगाएर थप अनुसन्धान गरिने प्रहरीले जनाएका छन् । तामाङको अल्पायुमै नि’धन भएपछि अहिले उनको परिवार शोकमा डुबेका छन् । उक्त दु:खद घ’टनाको बारेमा स्थानीयसँगको कुराकानी तलको भिडियोमा :
Prevबाबुराम र कुलमान एकै ठाउँ, मर्स्याङ्दी प्रसारण लाइनमा देखिएकाे अवरोध हटाउन पहल
Nextकाठमाडौंका यी ५१ स्थानमा दायाँ मोड्न नि’षेध, १० ठाउँमा वान वे ! [ जानकारीको लागी सबैलाई शेयर गरौँ ]
कोरोनाका कारण स्कुल-कलेज बन्द गर्ने कतारको घोषणा
भाइरल दृष्टिबिहिन नानीहरुलाई पाँचको खाना दिने कुमारले गरे यतिधेरै सहयोग (हेर्नुहोस भिडियो)